जङ्गलको बाटो, जुकाको चुसाइ | राजेन्द्रमान डंगोल
नियात्रा राजेन्द्रमान डंगोल August 18, 2020, 9:37 pm
पौने छ बजे सूर्योदय हुन्छ भन्ने जानकारी गराएको थिएँ टोलीलाई । त्यही मुताबिक क्यामरा हातहातमा लिएर होटलको छतमा उक्लेका थिए उनीहरू । अघिल्लो साँझदेखि नै गुफा बसेका हिमालहरूले बादलको ढोका खोल्न सकेका थिएनन् ।	सात बज्दा पनि उघ्रेन आकाश । अन्ततः ‘हिस्स बुढी खिस्स दाँत‘ भन्ने उखान चरितार्थ भएरै छाड्यो ।
कुनै मान्छेको पेटमा । कुनै पानीमा । सबैभन्दा खतरनाक चाहिँ कुर्सीमा बस्ने नै हुँदो रहेछ । टाँसिएपछि टाँसिएको टाँसियै । ढाडिएर बसेपछि नुनको पोकोले ठेगान लगाउनै नसकिने । त्यसैले त सधँै खोक्रो हुँदोरहेछ देश ।
काई र लेउले भरिएको बाटोमा लड्दै र पड्दै हिँडेको डेढ घण्टा भइसक्यो । अझै दुई घण्टा हिँड्नु छ । के गर्नु ! हिँड्नु त परिगो ।	जयनाथको विश्वासको फेर समातेर चिप्लेटी खेलिरहेका छौँ हामी । जङ्गलले पनि गुञ्जाउँथ्यो अट्टहास प्रत्येक पटकको हाम्रो लडाइमा । साँच्चै उपहासका पात्र भएका थियौँ हामी ।
त्यही रुमालमा पञ्चासेको फूल राखेँ मैले.........’
पञ्चासे तालमै पुगेझैँ भएथ्यो उनको कुरा सुन्दा । मेरा आँखाअगाडि आए– माछापुछ«े, धौलागिरि र अन्नपूर्णाका आकृतिहरू ।
‘भोलिको सुर्योदय पनि देख्न नपाइने भयो ।’ चिन्ताको ग्रहण लागेको थियो माधवजीको मुहारमा ।
“उः त्यो डाँडा ले छेकेको छ ।” सीतारामको जवाफ ।
धूमिल थियो दृश्य । अग्लो पञ्चासे भञ्ज्याङले देख्न नसकेको घाम होचो पोखराले कसरी देखोस् ! अन्नपूर्णा, माछापुच्छ«े र धौलागिरिहरू बादलभित्र हराएपछि सुन्य लाग्थ्यो संसार । घामको उज्यालो नपर्दा उदासिलो बन्दारहेछन् धर्तीका पत्रहरू ।